PDF Pro 2, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny endrika fisie PDF dia nanjary be mpampiasa indrindra rehefa mizara antontan-taratasy hisorohana ny fanovana manaraka, na amin'ny alàlan'ny orinasa tsy miankina na amin'ny alàlan'ny orinasam-panjakana. Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hanova rakitra amin'ity endrika ity isika. Androany dia miresaka momba ny PDF Pro 2 izahay, fampiharana iray ahafahantsika mamaky, manova ary manazava an-tsary ny rakitra PDF mivantana avy amin'ny iPhone sy iPad. Ity rindrambaiko ity dia misy vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 3,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy avelako any amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Amin'ny PDF Pro 2 isika dia afaka manasongadina lahatsoratra, mandray an-tsoratra, manao sary amin'ny rantsan-tànantsika, manampy rakipeo feo na an-tsary, manaova fikarohana an-tsoratra na amin'ny rakitra PDF na amin'ny tranomboky fisie izay ananantsika ao amin'ilay rindrambaiko. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny endrika amin'ny rakitra PDF ary mamela antsika hanao sonia antontan-taratasy amin'ity endrika ity.
PDF Pro 2 dia mifanaraka amin'ny Dropbox, Google Drive, mpizara FTP, WebDAV… Fa azontsika atao ihany koa ny maka tahaka azy ireo mivantana amin'ilay rindranasa rehefa mampifandray ny finday avo lenta amin'ny iTunes izahay na manokatra azy ireo mivantana avy amin'ny mailaka noho ny fanitarana atolotry ny fampiharana. Vantany vao vita ny fanitsiana ny rakitra, ao anatin'izany ny fanamarihana, dia azontsika atao ny manonta azy ireo mivantana avy amin'ilay fampiharana na mizara amin'ny alàlan'ny mailaka.
Ny iray amin'ireo safidy ananan'ny PDF Pro 2 ary tsy hitantsika amin'ny fampiharana hafa amin'ity karazana ity dia ny mifanentana amin'ireo rakitra voaaro amin'ny teny miafina, tenimiafina izay tsy maintsy fantatsika mba hanokafana ny antontan-taratasy araka ny lojika. Raha matetika isika no miasa amin'ity endrika fisie ity, fotoana tsara hanandramana fampiharana hafa, indrindra fa azo alaina maimaim-poana izy io ary hankalazana ny fandefasana ny kinova 3 an'ny PDF Pro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » PDF Pro 2, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
RaulG dia hoy izy:
Maimaimpoana ihany koa ny pro kinova 3
Valiny tamin'i RaulG
Marina, saingy io no namboarina farany indrindra tamin'ny fividianana rindrambaiko mba hahafahany manao zavatra mitovy amin'ny kinova 2
Avy amin'ny tadiny maodely mankany amin'ny tadin'ny bateria ho an'ny Apple Watch